» आज नेपाल आईडलको फाईनल भिडन्त, कसको कति जित्ने सम्भावना ?
आज नेपाल आईडलको फाईनल भिडन्त, कसको कति जित्ने सम्भावना ?
१२ भाद्र २०७७, शुक्रबार १५:३५
चन्द्र घलान, मकवानपुर, १२ भदौ । लामो समयको पर्खाईपछि अन्तत आज नेपाल आईडल सिजन ३ को फाईनल भिडन्त हुँदैछ । सिजन ३ को फाईनलबाट आज नै नेपाल आईडलको तेस्रो सिजनको विजेता घोषणा गरिनेछ । फाईनलमा पुगेका सज्जा चौलागाई, प्रविण बेड्वाल र किरण कुमार भुजेललाई भोट गर्ने समय आज साँझ ५ बजेसम्म मात्र छ । त्यसपछि आजकै कार्यक्रममा तेस्रो नेपाल आईडल लाईभ घोषणा हुनेछ । फाईनल राउण्डको प्रत्यक्ष प्रसारण टेलिभिजन, रेडियो र युट्युबमार्फत एकैपटक हुनेछ । नेपाल आईडलको थापाथलीस्थित स्टुडियोमा हुने फाईनल कार्यक्रम राति ८ बजेदेखि सुरु हुनेछ । कार्यक्रममा महामारीका कारण अन्य दर्शकहरुलाई प्रवेश गर्न दिईनेछैन । फाईनलमा पुगेका प्रतियोगीहरुमध्ये कसले आईडल जित्ने सम्भावना धेरै छ त ? आउनुहोस् एउटा सही हुनसक्ने तर्कसहित छलफल गरौँ । हेर्नुहोस् पूरा विवरण यो भिडियोमा–
नेपाल आईडलका दर्शकहरुकै कुरालाई विचार गर्ने हो भने शोका विजेता प्रविण बेड्वाल बन्नेछन् । किनभने नेपाल आईडलका धेरैजसो एपिसोड, एकल प्रस्तुतिको भिडियो र फाईनालिष्टहरुले दिएको अन्तरवार्ताहरुको भिडियोमा गरिएका कमेन्टहरुका आधारमा प्रविण नै सर्वाधिक रुचाइएका देखिन्छन् । तर कमेन्टले भन्दा पनि नेपाल आईडल जित्ने भोटले हो । त्यसैले प्रविणलाई केही खतरा पनि छ । हुन त प्रविणले दुई पटक सर्वाधिक भोट पनि पाएका छन् । आईडलको स्टेजमा निर्णायकहरुबाट नै संगीतको उस्तादको संज्ञा पाएका प्रविणको संगीत साधनाको खुलेरै प्रशंसा पनि भईरहेको छ । अवार्डका हिसाबले हेर्ने हो भने उनले १२ वटा अवार्ड जितेका छन् । उनी सर्वाधिक अवार्ड विजेताको दोस्रो नम्बरमा छन् । उनले २ पटक बटम थ्रीको सामना गरेका छन् । उनी संगीतमा स्नातक गरिसकेका गायक हुन् । उनका अफिसियल गीतहरु पनि सर्वाधिक चर्चामा आएका छन् ।
त्यस्तै सज्जा चौलागाई प्रविण र किरण दुबैको लागि चुनौतिको पहाड हुन् । रक स्टारको छवि बनाएकी सज्जाले दुबै फाईनालिष्टहरुलाई कडा टक्कर दिँदै आएकी छिन् । उनलाई पहिलो महिला नेपाल आईडल भएको हेर्न चाहाने दर्शकहरुको ठूलो भिड छ । दर्शकको कमेन्टका आधारमा हेर्ने हो भने प्रविणपछि सर्वाधिक रुचाइएकी प्रतियोगी सज्जा नै हुन् । अवार्डका हिसाबले पनि सज्जा सर्वाधिक अवार्ड विजेताको शिर्ष स्थानमा छिन् । उनले यस सिजनमा १६ वटा अवार्ड जितेकी छिन् । भोटिङका आधारमा भने सज्जालाई खतरा छ । किनभने उनी ३ पटक बटम थ्रीमा परिसकेकी छिन् । उनले आजसम्म सर्वाधिक भोट पनि प्राप्त गरेकी छैनन् । संगीतको औपचारिक शिक्षा लिने मौका पनि उनले पाएकी छैनन् । सज्जाका अफिसियल गीतहरु पनि सर्वाधिक हिट भएका छन् । उनलाई दर्शकहरुले सर्वाधिक भोट गरेमा सज्जालाई नेपाल आईडल बनेको हेर्नपाईनेछ ।
त्यस्तै फाईनलमा पुगेका प्रविण र सज्जालाई कडा टक्कर दिने अर्का फाईनालिष्ट किरण कुमार भुजेल एक स्थापित गायक पनि हुन् । उनका सर्वाधिक चर्चामा रहेका गीतहरु निक्कै छन् । वाईल्ड कार्ड राउण्डमा सर्वाधिक भोट ल्याउँदै अगाडि बढेका किरणले दुई पटक सर्वाधिक भोट प्राप्त गरिसकेका छन् । यस सिजनमा भर्सटाईल सिंगर र रियल पर्फोमरका रुपमा उभिएका किरणको सर्वत्र चर्चा छ । दर्शकहरुले उनको प्रस्तुति र गायनलाई उत्तिकै मनपराएका छन् । उनले संगीत विषयमा नै स्नातक गरिसकेका छन् । अवार्डका हिसाबले भने उनी तेस्रो नम्बरमा छन् । उनले ६ वटा मात्र अवार्ड पाएका छन् । भोटका आधारमा हेर्ने हो भने किरण सर्वाधिक बलिया छन् । किनभने उनले एकपटक मात्र बटम थ्रीको सामना गरेका छन् । यसर्थ उनलाई यसपटक पनि राम्रो भोट आउने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
यी तिन प्रतियोगीहरुले पाएका उपलब्धीहरुका आधारमा हेर्ने हो भने अवार्डका हिसाबले सज्जा अगाडि र भोटक हिसाबले किरण अगाडि छन् । त्यस्तै चर्चाका हिसाबले भने प्रविण अगाडि छन् । आज यी मध्ये जो आईडल बनेपनि उनीहरु तिनै जना उपाधीका दाबेदार र हकदार हुन् । तपाईको विचारमा यो सिजन कसले जित्छ होला ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोस् । यस्तै भिडियोहरुका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राईब गर्नुहोस् ।